DIR-300 FIRMWARE ကို 1.4.2 နဲ့ 1.4.4 - ဆောင်းပါးများ - 2019
DIR-300 firmware ကို 1.4.2 နဲ့ 1.4.4
Router က configure 25.12.2012 | သတင်း
မနေ့ကတရားဝင်ရုရှားက်ဘ်ဆိုက် D-Link ပေါ်တွင် ftp.dlink.ru ver Wi-Fi ကို router ကို D-Link DIR-300 NRU ဟာ့ဒ်ဝဲတည်းဖြတ်မူများကိုများအတွက် firmware ကိုအသစ်ဗားရှင်းထွက်ချထားခံခဲ့ရသည်။ ခ 5, B6 ဟာနှင့် B7 ။
ထို့ကြောင့်လက်ရှိ firmware ကိုဗားရှင်း:
1.4.2 - ထို DIR-300 B7 များအတွက်
အဆိုပါ DIR-300 ခ5အဘို့နှင့် B6 ဟာ (ယခု5နှင့် B6 ဟာများအတွက်တူညီသောဖိုင်) - 1.4.4
firmware ကို 1.4.1 နဲ့ 1.4.3 နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အတွက် interface ကို setting များကို panel ကပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပျက်ပါဘူး - သည်, အသစ်က firmware ကိုအတူ DIR-300 router ကို setting အလားတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ညွှန်ကြားချက်
အသစ်က firmware ကိုအတူက Settings မျက်နှာပြင်ကို D-Link DIR-300 (ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
ငါမပြောနိုင်ပါဘူးသည်အထိကျန်းမာရေးအကြောင်း: ယနေ့နံနက်ကသင်၏ D-Link DIR-300 B6 ဟာမှအသစ်က firmware ကို install လုပ်ပြီးသား - နှစ်နာရီလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကပုံမှန်, ထို့နောက် Skype ကိုနှငျ့ဆကျသှယျအတွက်သုံးနေပြီနှင့်အဆက်ဖြုတ်သည်။ ငါမသိအကြောင်းမရှိ - ရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့, တူညီတဲ့ Beeline ၏ဘက်မှာပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစောင့်ကြည့်ဖို့ဆက်လက် - နှင့်ဤ entry ကိုမှရေးဖြည့်စွက်ရဲ့အဆုံးမှာ။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ထံမှတစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက်ဝမျးသာဖြစ်လိမ့်မည်။
UPD: - ပုံမှန်ပျံဝဲမှတ်ချက်များခုနှစ်တွင် DIR-300NRU ခ5ရက်နေ့မှာတည်မငြိမ် 1.4.4 ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ငါထလာပြီငါ:အဆိုပါ firmware ကိုအသစ်ဗားရှင်းအများစုဟာအသုံးပြုသူများအထူးထူးအပြားပြားပြဿနာတွေကြုံနေရနေကြသည်။ သငျသညျယခင်ပြဿနာပြန်လှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါသိပ်, ဟောင်း firmware ကိုပြန်သွားဖို့အတင်းအကျပ်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါအဆင့်မြှင့်အကြံပြုကြပါဘူး။
Wi-Fi ကိုမှသင်၏ password ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
ငါက Wi-Fi ကိုအပေါ် password ကိုမေ့ - ဘာလုပ်ရမှန်း (သင်ယူ connect, ပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ)
မည်သို့ကို Windows, MacOS, iOS နဲ့ Android အတွက် Wi-Fi ကွန်ရက်မေ့ပစ်ရန်
မည်သို့ Wi-Fi ကွန်ရက်ဖုံးကွယ်ပြီးဝှက်ထားသောကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်
အင်တာနက်ကိုတစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးမှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ် Router ကတဆင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ဗီဒီယို Watch: DLINK : http: (အောက်တိုဘာလ 2019).
Outlook နဲ့တစ်ဦးလက်မှတ်ကို set up
(Re-flash ကို) တစ်ဦးလက်ပ်တော့အပေါ် BIOS ကို update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းများ၏ဗားရှင်းကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းနှင့်လျင်မြန်စွာကွန်ပျူတာ၏ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများကို run ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အစိတ်အပိုင်းများတွေအများကြီးကတည်းကအပေါငျးတို့သနောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုလမ်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ကြပါဘူးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများဆော့ဖ်ဝဲရေးပေါ် မူတည်. updates များကိုတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လ go, ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှင့်အဆက်မပြတ်အထူးအစီအစဉ်များရှိသူတို့ကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့မည်မဟုတ်ပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
အော်ပရာဘရောက်ဇာကို: စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများအော်ပရာ Turbo Mode ကို
https://termotools.com my.termotools.com © ဆောင်းပါးများ 2019